Belọ Ọrụ Na-ebu Hub - China Hub Bearing Manufacturers, Suppliers
QYBZ Hub Iburu m
Isi ọrụ nke ụgbọ ala ụgbọala na-ebu bụ ibu ibu ma nye nduzi ziri ezi maka ntụgharị nke wiil wheel. Ọ bụghị naanị na ọ na-ebu ibu axial kamakwa ọ na-ebu ibu radial. Ọ bụ akụkụ dị oke mkpa.
Omenala ụgbọala ụgbọala na-agba agba nwere mpempe abụọ nke mgbatị ma ọ bụ bekee. Ntinye, mmanu mmanu, akara na nhichapu nke bekee ka emere na ntinye ohuru.
Ihe owuwu a na - eme ka o sie ike ichikota na ulo oru ugbo ala, ugwo di elu na ntukwasi obi. Ọzọkwa, mgbe ụgbọala dị na ebe ndozi, ọ dị mkpa ka a kpochaa ihe ahụ, gbanye mmanụ ma gbanwee ya.
QYBZ Hub Na-agba III
Bearinggba ụkwụ ụkwụ bụ ihe pụrụ iche na-emetụta wiilị ụgbọ ala, nke na-ebu ibu nke ụgbọala ahụ dum, ike ngwangwa, ike na-agbadata, na-agbanye ike dị n'akụkụ, na ịma jijiji na mmetụta nke ọnọdụ ụzọ. Iji hụ na nchekwa na ntụkwasị obi n'oge braking, usoro mkpọchi mkpọchi (ABS) na-ewu ewu. Ya mere, ahịa ahụ nwere ọchịchọ na-arịwanye elu maka ebe a na-ebugharị wiil na-arụ ọrụ sensọ. Enwere ike ịkekọrịta wiilị wiil na ụdị nke mbụ, nke abụọ na nke atọ dịka mmepe ha.
QYBZ Hub Iburu II
Ebe a na-agba ọsọ ụkwụ ụkwụ bụ akụkụ dị mkpa nke ụgbọala. Ngwunye axle bụ ọrụ maka mbenata nguzogide esemokwu mgbe chassis na-agba ọsọ ma na-ejigide ụgbọ ala nkịtị. Ọ bụrụ na ụlọ ọrụ na-ada ada, ọ nwere ike ịkpata mkpọtụ, na-ebu kpo oku, wdg, ọkachasị wiilị dị n'ihu na-ahụkarị, ọ dịkwa mfe ịkpata ihe egwu dị egwu dịka enweghị nchịkwa. Yabụ, ekwesịrị idobe ebe a na-agba ọsọ na oge.
A na-eji ebe a na-etinye Hub na axle iji ebu ibu ma nye nduzi ziri ezi maka ntụgharị ihu igwe. Ọ bụghị naanị na ọ na-ebu ibu axial kamakwa ọ na-ebu ibu radial. Ọ bụ akụkụ dị mkpa nke ibu ụgbọala na ntụgharị.